टिकटक भिडियाेमा धेरै लाइक्स् र भ्यू पाउने नानीलाई गरियो पुरस्कृत नगदले ! (भिडियो हेर्नुहोस) – Khabar PatrikaNp
टिकटक भिडियाेमा धेरै लाइक्स् र भ्यू पाउने नानीलाई गरियो पुरस्कृत नगदले ! (भिडियो हेर्नुहोस)
October 17, 2020 327
काठमाडाैं। टिकटक भिडियाे प्रतियाेगितामा धेरैकाे लाइक्स् र भ्यू पाएकाे एउटा नानीलाई दश हजार रूपैयाँले गरिएकाे छ।
यसरी सजिलै हटाउँनुहोस तपाईको अनुहारमा आएको डण्डीफोर(भिडीयो हेर्नुहोस)
प्रशस्त सुत्दा पनि डण्डीफोर कम हुने त मानिन्छ तर केही सजिला उपायहरूबाट ड’ण्डीफोर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विकिहाउले लेखे अनुसार दिनमा कम्तिमा तीन पटक राम्रोसँग मुख धुनुपनि डण्डीफोर घटाउने गतिलो उपाय हो । यस्ता छन् थप उपायहरूः हप्ताको एक पटक डाक्टरको सल्लाह अनसार विभिन्न वस्तुले अनुहार लेपन गर्नुहोस र अनुहार मास्क लगाउनुहोस । अनुहारमा अनावश्य क्रिमहरू नलगाउनुहोस् ।
विहान दिउँसो र वेलुकीको समयमा मनतातो पानीले राम्रोसँग मुखु धुनुहाेस् । मुख धाेएपछि सफा टावेलले पुछ्नुहोस् र अनुहार सुख्खा राख्नुहोस । अनुहार सुख्खा भएको बेला गतिलो क्रिम छान्नुहोस मुखमा आउने डण्डीफोरलाई छुने वा निचोर्ने काम नगर्नुहोस । अनुहारमा घाम पर्न नदिनुहोस । चिल्लो खानेकुराहरू नखानुहोस । चकलेट र अन्य प्याकिङ गरिएको खानेकुराले पनि डण्डीफोर बढाउँछ । प्रशस्त पानी पिउनुहोस । प्रशस्त पानी पिएको केही दिनमै तपाईको अनुहारमा फरकपन देखिने छ ।
अ’नुहारका दाग ध’ब्बा हटाउ’न कस’री बनाउ’ने घ’रेलु फे’सप्याक ? चिसो मौसममा अनुहारमा चाया पोतो आउने, दाग तथा बिबिराहरू निस्कने, फुट्ने र अनुहार सुक्खा हुने जस्ता समस्या आइरहन्छन् । हाम्रो अनुहारको छाला निकै संवेदनशील हुन्छ । यसको हेरचाह गर्न जानेमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुरक्षित राख्न सकिन्छ । घरमा पाइने सामग्रीबाटै हामीले उपयोगी फेसप्याक बनाउन सक्छौ ।
चाहिने सामग्री: दुई चम्चा मुसुरोका दाल, एक चम्चा चामलको पिठो, दुई चम्चा गुलाबजल, एक चम्चा बेसारको धुलो, आवश्यकअनुसार ओटमिल बनाउने तरिका: ओटमिल, मुसुरोको दाल र चामलको पिठोलाई मसिनो हुने गरी पिस्ने र मिसाउने। उक्त मिश्रणमा गुलाबजल र बसार मिसाएर राम्ररी फिट्ने। आफ्नो अनुहार निकै सुक्खा र फुस्रो छ भने अलिकति काँचो दूध पनि मिसाउन सकिन्छ।
तयार भएको यो पेस्टलाई करिब १० मिनेट छोपेर राख्ने । प्रयोगका लागि फेसप्याक तयार भयो। विस्तारै मसाज गर्दै फेसप्याक अनुहारमा दल्ने। केहीबेर अनुहारमै सुक्न दिने । फेसप्याक सुकेर कक्रक्क परेपछि पानीले भिजाउने र विस्तारै पुछ्ने। यसले अनुहारमा रहेका मृत कोषिकाहरू निस्किन्छन्। जसले गर्दा अनुहार उज्यालो र चम्किलो देखिन्छ ।
Prevशनिबार: शनिदेवको पूजा गर्नुहोस धन-संपत्ति, सम्मानको प्राप्ति हुनेछ..
Nextर लाख बती बालेको देख्ने बितिकै चोखो मनले ॐ लेखी सेयार गरौ
बाबुआमालाई पछ्याउँदै आएको नाबालक छोरोलाई घरकै छेउमा रहेको रेखा खोलाले बगायो
मलाइ क्ष’ति’पु’र्ती र जिम्मेवारी दिए ७ दिनमै निर्मलालाई न्या’य दिन्छु : एसपी बिष्ट
नेपाली बाल कराते खेलाडी रन्जितलाई ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड’ अवार्ड – सम्मान स्वरुप शेयर गरौँ !
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (27966)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27755)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24472)
महिलालाई घरको लक्ष्मी मानिन्छ,महिलाहरूले राती यस्ता काम गरे परिवारको भाग्य र सफलता
दर्शन गर्न जादा ऑफै घन्टि बज्छ अकला मन्दिर (हेर्नुहोस भिडीयो)